यी ४ राशिको भाग्य ३ वर्षसम्म चम्किने, कतै तपाईको राशी त् परेन ! जानी राखौ | Rock Star News Online
Home बिबिध यी ४ राशिको भाग्य ३ वर्षसम्म चम्किने, कतै तपाईको राशी त् परेन...
केहि समय देखि हल नभएको आर्थिक समस्या समेत हाल हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। यी राशी हुने व्यक्तिहरुको नबनेको कार्य समेत फत्ते हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यको मामिलामा पनि यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्यको राशी परिवर्तन शुभ हुनेवाला रहेको छ।
स्वास्थ्यमा भएको सम्पूर्ण विकार हटेर जाने देखिन्छ। अध्ययनमा सफलता हासिल गर्नको लागि खासै दुख गर्नु नपर्ने देखिने भएता पनि शिक्षाको क्षेत्रमा सानो-तिनो पनि लापरवाहीले दुख निम्त्याउन सक्छ।
सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा बढ्ने योग बन्न सक्ला भने सामाजिक सम्मान पनि प्राप्त होला। तर सामाजिक क्षेत्रमा दायित्व समेत बढ्ने हुँदा कार्यबोझ भने बढेको आभास हुन सक्ला। यी ४ राशी हुनेहरुको लागि सुर्य राशी परिवर्तनले पारिवारिक शुख समेत दिलाउन सक्ने देखिन्छ।
आर्थिक मामलामा थोरै मात्र संयमता राख्नु भएमा पनि राम्रै लाभ मिल्न सक्ला। सुर्य परिवर्तनले यी ४ राशी हुनेहरुको कुण्डलीमा रहेको नक्षत्रमा विशेष महासंयोग बन्न सहयोग गर्ने हुँदा ३ वर्षसम्म लाभ मिल्ने हुन्छ।
दुखद खबर : धुर्मुसलाइआयो आपत्ती ; हे भगवान किन यस्तो हुन्छ
खानाभन्दा धेरै औषधि होला : धुर्मुस, पढ्नुस हासो भित्र लुकेको उनको दर्दानाक कहानी केही समयअघि सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ वीरअस्पतालको ‘उपचार’ मा व्यस्त थिए। सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल सफाई अभियानमा अभियन्ताको मनोबल बढाउने सोच लिएर पुगेका थिए।
गरिब–दुःखी नेपालीको भरोसाको केन्द्र वीर अस्पताल फोहर र धुलोमैलोले आफैं बिरामी परेको देखेपछि उनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन्। सफाई अभियन्ता खेम शर्मालाई सक्रिय सहयोग गर्न थाले। पानीले पखाल्ने ठाउँ त सफा हुन थाल्यो, तर रङ खुइलिएर अँध्यारो ठाउँ जस्ताको त्यस्तै। उनी रङरोगन गर्न पनि कस्सिए।
पेट रोगका लागि नाम चलेका डाक्टर आइएल आचार्यकहाँ पुगेर उनले यसबाट उन्मुक्ति पाउन उपाय मागे। उनले अल्ट्रासाउन्ड गरी अवस्था बुझे। त्यसपछि केही औषधि सिफारिस गर्दै खानपानमा नियमितता र अनुशासनका लागि जोड गरे।
‘ग्याष्ट्रिकका लागि अल्ट्रासाउन्ड गरेकै यो चौथोपटक हो,’ उनले भने। डाक्टरको दृष्टिमा उनको ग्यास्ट्राइटिस चिन्ता लिनुपर्ने तहमा पुगेको छैन। तर, उनलाई भने यही अवस्थाले पनि निकै समस्यामा पारिरहेको छ। यो समस्या उनी १२ वर्षदेखि भोगिरहेका छन्। उनले ठट्टा गरे, ‘म त ग्यास्ट्रिक ब्रान्ड एम्बेस्डर नै हो।’
औषधि उपचार पनि १२ वर्षदेखि नै गराउँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म ठीक भएको छैन।ग्यास्ट्रिकका लागि गरिने एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक दुवै विधि प्रयोग गरिसकेका छन्। यसका लागि औषधि राख्ने ‘स्टोर’ समेत हुन्थ्यो कुनै समय उनको घरमा। भन्छन्, ‘मैले जीवनमा खानाभन्दा धेरै त औषधि खाएँ होला।’ रत्नपार्कमा बेचिने चुर्णदेखि विदेशमा बनेका महंगा औषधिसम्म सबै उपभोग गरिसकेका छन् उनले। केही वर्षअघिको कुरा हो, जतिबेला ५० हजार रुपैयाँको ठूलो महत्व थियो। उनले एक चर्चित पत्रिकामा विज्ञापन छपाए– धुर्मुसको ग्यास्ट्रिक निको पार्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ।
धुर्मुसले काठमाडौंमा टिक्न सबैभन्दा पहिले मार्केटिङको काम गरे। पत्रिकामा प्रकाशित हुने विज्ञापनमार्फ्त उनले जागिर पाएका थिए।
उनले कमिसनको आधारमा किचनका सामान बेच्थे। उनलाई अहिले पनि आफूले बेचेको सामानको लिस्ट कण्ठस्थ छ। ‘मैले ननस्टिक प्यान, कराई, मैन बत्तीको स्ट्यान्ड र ग्याँसको रेगुलेटर बेचेको छु,’ उनी सम्झिन्छन्।
केही महत्वाकांक्षी योजनासहित अघि बढिरहेका उनी यही क्रममा वीर अस्पतालसँग जोडिएका हुन्। अस्पतालको शौचालय सफा गर्ने मनसाय बनाएर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालको सरकारी अस्पताल सरसफाई अभियानमा सरिक भएका उनलाई त्यतिले मात्र चित्त बुझेन। उनलाई लाग्यो, ‘ट्वाइलेट चम्काएर मात्रै के गर्नु, भित्ता उस्तै मैलो र अँध्यारो छ, यसलाई पनि चम्काऊँ।’
अहिले उनलाई नेपालका सरकारी अस्पतालका फोहर त त्यहाँको प्रणाली हो भन्ने लागिरहेको छ। वीर अस्पतालमा रातदिन बिताइरहँदा उनको मनमा एउटै कुरा खेल्थ्यो, ‘बिरामीहरू अस्पताल आएर थप बिरामी बन्ने वातावरणको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला।
महिनावारी हुदा पेट किन दुख्छ, उपचार के गर्ने ? रिपोर्ट
‘कोल्ड ड्रिङ्क्स’ को सट्टा दही, मही पिउनुहोस् – डा. अरुणा उप्रेती